DEG-DEG: Matthijs de Ligt oo soo gaaray xarunta J-Medical si uu caafimaadka ugu maro kooxda Juventus + SAWIRO – Gool FM
Abdirashid Mohamud July 17, 2019
(Turin) 17 Luulyo 2019. Matthijs de Ligt ayaa soo gaaray xarunta J-Medical si uu caafimaadka ugu maro kooxda Juventus, xiddig wax badan la sugaayay ayaana natiijadiisa la sugi doonaa daqiiqadaha soo aadan.
Xiddigaan reer Holland fiidnimadii xalay ayuu soo gaaray magaalada Turin, waxaana lagu hadal hayay oo lagu tabiyay sheekadiisa barta twitter-ka kooxda.
Xiddigaan hadda wuxuu ku sugan yahay xarunta ay Bianconerri caafimaadka ku mariso ciyaartoydeeda, waxaana la filayaa inuu saxiixo heshiis shan sano ah oo fasalkii uu ku qaadanayo 7.5 Malyan oo Yuuro iyo gunno lagu sheegay 4.5 Malyan oo Yuuro oo ku xiran waxyaabo gaar ah.
19-jirkaan ayaa muddo ahaa bartilmaameedka koowaad ee kooxda marwada duqda ah, waxeyna kooxda weysay Andre Barzagli oo ka fariistay ciyaaraha iyo Martin Caceres oo isna isaga tagay Turin.
Xiddigaan 20-jirsan doona bisha soo aadan ayaa ku guuleystay inuu hantiyo qalbiyada taageerayaal badan oo jecel kubadda cagta, wuxuuna sidoo kale isagoo dhalinyar noqday hogaamiyaha kooxda Ajax.
SAWIRO DHEERI AH:
Tababare Solskjær oo ka hadlay go’aankiisa kama dambeysta ah ee kaga aadan Alexis Sánchez